Barnaamijka McKnight Foundation ee barnaamijka Southeast Asia wuxuu aqoonsan yahay in dadka maxalliga ah ay ku sugan yihiin meesha ugu fiican ee lagu aqoonsan karo hirgelinta xalalka beesha ee xuquuqda ilaha bulshada iyo maareynta khayraadka dabiiciga ah. Hase yeeshe, isku dheelitir la'aanta awoodda maxalliga ah, qaranka, iyo caalami waxay wiiqi kartaa awoodda dadka maxaliga ah si loo xalliyo dhibaatooyinka siyaasadeed, kuwa xagjirnimada iyo bulshada.
Marka la eego xaaladdan, waxaan ka shaqaynaynaa inaan taageerno awoodda gobolka si loo xalliyo dhibaatooyinka siyaabo ay wax uga qabtaan, oo ay ku jiraan, iyo la socdaan codka bulshada. Taasi waxay u baahan tahay:
Xoojinta maxalliga ah waxaa lagu duuduubay kheyraadka, xirfadaha, iyo xiriirinta.
Horumarinta xuquuqda ee degaanka waxaa sii xoojiya iskaashiga hay'adaha aan dawliga ahayn iyo ururada, bixiyeyaasha, iyo shabakadaha.
Dadaallada caalamiga ah, gobolka, iyo qaranka ayaa isku xiran si loo xoojiyo xoojinta bulshada.
Waxaanu maalgelineynaa dadaal aan ku sii shideyno shaqeyn isbedel ah
Waxaan maalgalinaa dhexdhexaadiyeyaasha, barnaamijyada, iyo mashaariicda ka shaqeeya gobolka hoose ee Mekonga ee koonfur bari Aasiya, oo ay ka mid yihiin:
Barnaamijyada iyo mashaariicda maxalliga ah iyo kuwa mashaariicda ee Laos iyo Vietnam kuwaas oo ku yaalla beelaha maxaliga ah, waxayna ku wargeliyaan shabakado ballaaran, iskaashi, iyo / ama siyaasad.
Xakamaynta ururrada kuwaas oo maalgeliya isbeddel bulsho iyo dhisida hogaaminta maxalliga ah iyo awooda urureed.
Waxaan la shaqeynaa oo taageernaa iskaashiga iyo u doodista.
Waxaan maalgashadeynaa wadashaqayn maxalli ah, qaran, iyo caalami ah oo kobciya aqoonta, dhaqanka, iyo siyaasadaha saameynaya habka jaaliyada loo taageero inay yeeshaan cod xoog leh iyo awood dheeraad ah oo go'aan ka gaaraya gobolka hoose ee ku yaala koonfurta bari ee Asia, oo ay ka mid yihiin:
Dadaallooyinka saameeya nidaamka dhaqaale, bulsho, iyo siyaasadeed, oo saameeya beelaha la faquuqo.
Shabakadaha iyo iskaashiga ka dhexeeya dadaallada maxalliga ah, qaranka, gobolka, iyo caalamiga ah ee wargelinaya siyaasadda iyo dhaqanka.
Taageeradayadu waxay ku taallaa gobolka hoose ee kuyaal ee Southeast Asia, waddamada Laos, Cambodia, iyo Vietnam.